Articles Published in 2013 | Sagal Radio Services
Soomaaliya iyo Sacuudiga oo ka arrinsaday arrimo badan
Sagal Radio Services • News Report • January 1, 2013
Dalalka Soomaaliya iyo Sacuudiga, ayaa ka wada arrinsaday xaaladaha dalka Soomaaliya iyo isbadalladii ugu dambeeyey ee ka dhacay waddanka Soomaaliya.
Siiriya iyo Soomaaliya oo noqday 2-da dal ee ugu dhimashada badan suxufiyiinta sanadkii tagay ee 2012
Hay’adda caalamiga ah ee suxufiyiinta IFJ, ayaa soo cusbooneysiisay baaqa ay u direyso QM iyo dalalka adduunka si loo joojiyo dhibaatada iyo dilalka loo geysanaayo suxufiiyinta.
Golaha wasiirada oo ka doodey arrimo amniga uu ka mid yahay
Golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya, ayaa ka arrinsaday sidii loo dhameystiri lahaa ballan qaadyadii xukuumadda ee 100-ka maalin.
Africa: IFJ Renews Call to UN and Governments to Halt Slaughter of Journalists After 121 Killings in Bloody 2012
Press release The International Federation of Journalists (IFJ) today said that 2012 has been one of the bloodiest years for journalists and media workers after recording 121 killings in targeted attacks and cross fire incidents.
Xarrun caafimaad oo cusub oo laga furey Laascaanood
Sagal Radio Services • News Report • January 2, 2013
Xarun Cusub oo caafimaad oo ay maalgeliyeen dhakhaatiir dhowaan dalka debediisa ka soo laabtay ayaa maanta laga furay magaaladda Laascaanood xarunta gobolka Sool.
Theaterka qaranka oo lagu qabtay munaasabad lagu weyneynaayay waxqabadka dowladda ee sanadkii 2012
Munaasabad lagu weyneynaayay wax qabadkii dowlada ee sanadkii tagay iyo himillada sanadkan cusub ee bilowday, ayaa shalay galinkii dambe lagu qabtay xarrunta murtida iyo madadaallada ee National Theatre, Muqdisho.
Amniga dadka reer miyiga ah ee ku dhaqan Ximan iyo Xeeb & Galmudug oo laga dooday
Kullan looga hadlaayay sidii nabad loo dhex dhigi lahaa beelaha maamullada Ximan iyo Xeeb iyo maamulka Galmudug, ayaa lagu qabtay magaalada Cadaado ee xarrunta maamulka Ximan iyo Xeeb.
Shil dhimasho iyo dhaawac badan sababay oo soo gaaray booliiska Somaliland
Shan qof oo ka tirsan ciidamada booliska Somaliland,ayaa ku dhimatey 25 kalena waxa soo gaaray dhaawacyo, ka dib markii gaari ay ciidamadu la socdeen uu kula qallobmay shalay galinkii dambe tuulada Haleeye, oo 10 KM dhinaca bari ka xigta magaalada Hargeysa ee xarrunta Somaliland.
Haween dhimasho iyo dhaawac ka soo gaaray goob xaflad aroos ka socotay oo Shabaab ay rasaaseeyeen
Sagal Radio Services • News Report • January 3, 2013
Hal qof, ayaa dhintay seddex kalena way dhaawacmeen, kadib markii kooxo la sheegay inay Shabaab yihiin ay rasaaseeyeen goob aroos toddobo bax ay ka socotay tuulada Booco oo qiyaastii 65 KM u jirta magaalada Baladweyne ee xarrunta gobolka Hiiraan shalay galinkii dambe.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo dhiggiisa Sudan la kulmay, lana hadlay ardada Soomaaliyeed ee Sudan wax ku barta
﻿Madaxweynaha Jamhuurriyadda Soomaaliya Md. Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa magaalada Khartoum ee xarrunta dalka Sudan kula kulmay dhiggiisa Cumar Xasan Al-Bashiir shalay.